हिटलर र मुसोलिनी पनि जनप्रतिनिधि नै थिए : महन्त ठाकुर
ई-हुलाकी संवाददाता | चैत १०, २०७५ आइतबार | 0
संघिय संसदको तेश्रो अधिवेशन अन्त्यको अवसरमा आईतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले यथास्थितिलाई नै लाद्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । संविधान बनाउने समयमा पहिचानको आधारमा संघ हुनुपर्छ भनेर भनिएपनि सो अनुसार संघ नबनेको नेताहरुले नै स्वीकार गरेको भन्दै उहाँले परिर्वतनको महसुस अझै पनि जनताले गर्न नसकेको बताउनुभयो । राज्यको आतंक अहिले पनि जारी रहेको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दा राज्यले आफ्ना सांसदहरुले जन्मकैदको सँजाय सुनाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार माग्दा जेल जानुपर्ने ? आफ्नो अधिकारको माग कहिले गर्ने ? कुन व्यवस्थामा गर्ने ?”
अहिले पनि राज्यआतंक जारी रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सरकारले आतंक मच्चाउँदा इनाम पाउने, प्रसंमा पाउने, तक्मा पाउने र जनताले आफ्नो अधिकार माग्दा गोली खानुपर्ने, जेल जानुपर्ने, मर्नुपर्ने ?”
अहिले पनि अधिकार केन्द्रीत भएको र संघीय संरचना कागजको फुलमा मात्रै सिमित भएको दाबी गर्नुभयो ।
एउटा समुह र व्यक्तिमा सम्पुर्ण शक्ति केन्द्रीतकृत हुदा अधिनायवाद शैलीमा मुलुक जाने भन्दै उहाँले त्यो लक्षण नेपालको राजनीतिमा पनि देखिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले हिटलर र मुसोलिनी पनि जनप्रतिनिधि भएको र संसद बाटै अनुमोदन गराएर तानाशाह बनेको बताउनु भयो ।